Guangdong Qianjin Maindasitiri anodyara mukuvakwa kwe200,000-ton / gore yakafara kutenderera yekugadzira chirongwa chakagara muShizong, Yunnan - China Foshan Hermes Simbi
Guangdong Qianjin Maindasitiri anodyara mukuvakwa kwe200,000-ton / gore yakafara kutonhora yekugadzira chirongwa chakagadziriswa muShizong, Yunnan
Guangdong Qianjin Maindasitiri anoisa mari mukuvakwa kweiyo 200,000-ton / gore yakafara kutonhora yekugadzira chirongwa chakagadziriswa muShizong, Yunnan
Mumakore achangopfuura, Shizong County yakatevera pfungwa "yekuzadza cheni, kuwedzera ketani, nekusimbisa cheni", kuvimba nematanhatu 1.575 miriyoni ematare esimbi isina kugadzirwa simbi isina kugadzirwa. simbi maindasitiri ngetani, uye shingairira kuvaka isina simbi maindasitiri sumbu, uye shingairira kugadzira Shizong Iyo County Stainless Simbi Industrial Park yakavakirwa muYunnan yekutanga-kirasi isina simbi guta kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero.
Sekureva kwehurongwa, iyo Shizong County Stainless Simbi Industrial Park ine nzvimbo yakarongwa yenzvimbo ye 279.76 mahekita uye inofungidzirwa huwandu hwekudyara kwe7.81 bhiriyoni yuan. Inofungidzirwa kuti panosvika 2025, ichawana mari yekutengesa yemabhiriyoni 62.8 yuan, purofiti yakazara ye1.81 bhiriyoni yuan, uye mutero wakazara we1,26 bhiriyoni yuan. Izvo zvakarongerwa kutora makore matatu kusvika mashanu kuvaka iyo Shizong County Stainless Simbi Industrial Park mune yakagadziridzwa vhezheni yeketani rese remaindasitiri kubva pane zvakasvibirira, simbi, kupisa kupisa, kutonhora kutenderera kwakadzika kugadzira, uye dzakasiyana siyana zvigadzirwa zveasina simbi kuvaka. ndege inotakura-chikamu chesimbi isina tsvina sisitimu yemabhizimusi
Iyo indasitiri simbi isina chinhu indasitiri yakatanga neYunnan Tiangao Nickel Viwanda Co, Ltd., iyo yakakwezva kudyara muna2009. Iyo simbi isina simbi yekunyungudutsa yekugadzira yakapedzwa ikaiswa mukushanda muna Nyamavhuvhu 2012. Nekufamba kwenguva, iyo indasitiri imwechete uye isina kukwana maindasitiri cheni inorambidza. kuvandudza uye kukura kweShizong's Stainless simbi indasitiri.
Kuti upe kutamba kwakazara kune yakasarudzika zvakanakira yekutanga 1.575 mamirioni esimbi yesimbi isina kugadzirwa simbi yekugadzira kugona, Shizong County yakaunza Qujing Dachang Trading Co, Ltd., Chongqing Cuizhiyuan Enterprise Management Co, Ltd. uye Shizong County Fangwei Investment uye Development Co, Ltd. kuburikidza nekusimudzira kwekudyara. Shizong County Wolaidi Metal Materials Co, Ltd., iine huwandu hwakazara hwemamiriyoni mazana masere nemakumi matanhatu emamiriyoni euan, ichavaka matani emamirioni 1,4 e1780mm inopisa yekugadzira tambo uye matani mazana matatu e1450mm anodziya ekupisa uye pickling yekugadzira mutsara. Iyo purojekiti yakatanga kuvakwa muna Chivabvu 29, 2018 uye ichave ichipedziswa muna 2019. Iyo chirongwa chakapedzwa ndokuiswa mukugadzirwa muna Gumiguru 18, 2010. Kupedziswa kweprojekiti kwazadza mukaha mukugadzirwa kwesimbi yakakura muYunnan. Zvinotaurwa kuti Volody's hot rolling Production line ndeye yekutanga yakazara seti yekuzvimiririra yakagadziriswa nyowani steckel rolling mill yekugadzira mutsara muChina. Inotora tekinoroji yepamberi senge kupisa kunopisa uye kuchaja kunopisa kwema slabs, hydraulic ukobvu, otomatiki hupamhi hwekutonga uye humwe hunyanzvi hwemberi mukugadzirwa kweplate kumba uye kunze kwenyika. Kutenderedza akasiyana-siyana epamusoro-akaenzana simbi zvigadzirwa.
MuShizong County Stainless Simbi Industrial Park, Shizong County Wo Laidi Metal Material Co, Ltd. ingori imwe yemakambani mazhinji mudunhu reasina simbi epaki maindasitiri, uye ingori imwechete yekubatanidza mune isina simbi maindasitiri cheni.
Muna 2020, Shizong County Wolaidi Metal Material Co., Ltd. ichaburitsa matani mazana masere nemakumi masere ezviuru zvesimbi, ine huwandu hwehuwandu hwemabhiriyoni mashanu ema yuan uye purofiti yemamiriyoni zana nemakumi manomwe emamiriyoni. Panguva imwecheteyo, yakabudirira kuunza Yunnan Jingzhong Nyowani Zvishandiso Co, Ltd. ine goho regore rematani mazana maviri emakumi matete-akapamhama kutonhora kutenderera uye Guangdong Qianjin Maindasitiri ekudyara mukuvaka matani mazana maviri ehupamhi-upamhi kutonhora-kupeta kugadzirwa. mapurojekiti, pamwe nekutsigira kuvakwa kwesimbi isina tsvina, kuveura uye imwe mitsara yekugadzira. Iwo ekudzika epasi esimbi zvigadzirwa zvigadzirwa mabhizinesi anoda kupa akasiyana siyana esimbi simbi mahwendefa, mapaipi, nezvimwewo, izvo zvinowirirana neketani yese yekuvandudzwa kwesimbi isina tsvina indasitiri uye kuvhura iyo "yekupedzisira mamaira" iyo inokanganisa kuvandudza kwenzvimbo yedunhu isina tsvina simbi indasitiri.
Nekuvandudzwa kwesimbi isina simbi indasitiri cheni, Sichuan Guojinrong Metal Material Co, Ltd., Sichuan Pengzhou Zhongxin Metallurgy Co, Ltd., uye Chengming Nyowani Zvishandiso Co, Ltd. vatanga kuvaka kweplate uye pombi yekugadzira mapurojekiti. Parizvino, kuvakwa kwemashopu akaenzana kuri kuda kupera. Inotarisirwa kupedzwa uye kuiswa mukugadzirwa munaJune 2021.
Post nguva: Kubvumbi-10-2021